यसकारण गलत छ, प्रचण्ड-माधव समुहको अभियान | सुदुरपश्चिम खबर
यसकारण गलत छ, प्रचण्ड-माधव समुहको अभियान
अहिले नेकपाको नेतृत्वमा रहेका नेता कार्यकर्ता २०१७ सालको राजा महेन्द्रको प्रजातन्त्रविरूद्धको कू पछिको आन्दोलनबाट आएका हुन । पूर्खादेखि पुस्तासम्मको उद्देश्य र आकांक्षाको निरन्तरता यसमा रहेको छ । २००६ सालको पार्टी गठनका संस्थापक नेतृत्वमा रहेको पंक्ति कताकति मात्र जीवित भएको अवस्था हो यतिबेला ।
उनीहरूले गरेको आन्दोलनको निरन्तरता र त्यसको परिणामको रूपमा कम्युनिष्ट पार्टी लोकप्रिय भएको हो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रणि भूमिका खेल्दै सामन्ती र पूँजीवादी शक्तिहरूलाई पछि पार्दै गत आम चुनावमा बहुमतको सरकार चलाउने जिम्मेवारी पाएको हो नेकपाले । यो दुईचार जनाले हिजो अस्ति गठन गरेको नयाँ पार्टी होइन ।
यतिबेला ‘नेकपा सिङ्गो रहँदैन अब !’ भन्ने सडक हल्ला सुनिँदै छ । कतिपय शीर्ष भनिने नेताहरूले पार्टी फुट्दैछ, कार्यकर्ता तयार होउ ! भने भन्ने पनि बजार हल्ला छ । कस्को हित हुन्छ नेकपा फुट्दा ? सबैलाई थाहा छ, यसबाट कम्युनिष्ट विरोधीको चाहाना पूरा हुने हो । उनीहरूका भित्रभित्रै, कतिबेला खुल्ला आफ्ना चाहना, सपना अभिव्यक्त भएका पनि छन ।
कोभिड १९ को महामारी प्राकृतिक प्रकोपको कहर यही परिवेशमा नेकपामा वि,ग्रह गराउने कम्युनिष्ट आन्दोनलाई निस्तेज बनाएर पछाडि धकेल्ने अहिलेको (दृश्यमा कसैलाई ‘पद खोस्ने’ जस्तो लागे पनि) मूल उद्देश्य हो । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउँदा सहमति ‘ग’ अनुसार एकीकरण समाप्त हुने हुँदा ‘राजीनामा’ हात्तीका देखाउने दाँत मात्र हुन । यो बखेडाको गुह्य मकसद नेकपालाई छिन्न भिन्न पार्नु नै हो ।
त्यसैले पदको लागि गरिएको विधिपद्धतिको रटान कहिले काफल पाक्यो ! कहिले बीउ कुह्यो हुँदै आइरहेको छ । पदको लागि होइन भन्ने गोपनीयता बाहिरै छ्याङ्ङ छ पर्दाले छेकेर केही लुक्दैन । नेताको व्यक्तित्व बनाएका पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड यतिबेला संकटमा छन् ।
अब उहाँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहमति गर्न सक्ने हैसियत गुमाउदै जानुभएको छ । आफूलाई माधव नेपालको तहमा झारेर, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री खाने धन्धामा लाग्न हुदैनथ्यो उहाँ । अहिले माधव नेपाललाई उधारो अध्यक्ष दिने महाधिवेशनमा आफूले लिने कमजोर रणनीति सफल नहुने उहाँकै सहकर्मी साथीहरूले समेत भनेका छन ।
जानेर वा नजानेर पार्टी फोर्ने कालो इतिहास नदोहोर्याउनु माधव नेपालको हितमा हुन्छ । २०५४ का एमाले पार्टी फोरूवा माधव–वामदेव दुवैले यस्तो गलत काममा लाग्नु हुँदैन ।
हालसालै जबजको कुरा बोकेर देश दौडाहामा जाने माधव नेपालले जोक भन्नू भयो रे ! माधव नेपाल जी ! तपाइले जबजबारे कुन पुस्तक कहिलै लेख्नु भाछ र ? तपाइले आठौँ महाधिवेशनमा जेएन खनाललाई समर्थन गरेर छाड्नु भयो । नवौमा केपी (सातांैको प्रतिस्पर्धी) विरूद्ध उठ्नुभयो ।
के थियो कारण ? अहिले तपाइहरू केपीले पार्टी फुटाउँदैछन् भन्ने आरोप लगाउँदै हुनहुन्छ रे ! सिङ्गो पार्टीका अध्यक्ष बहुमत सरकारका प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय हितको अग्रपङ्तिमा रहेका केपीलाई सिंगो बलियो पार्टी चहिन्छ होला कि फुटेको टुक्रे पार्टी ? कुनै तर्कले, इतिहासले, अनुभवले पुष्टि नहुने यस्तो झुठटो कुरा जनस्तरमा समेत खुलाखुलस्त छ ।
भीम रावलको आफू पद बाड्न हाम्रा टाउका गन्ने भन्ने अभिव्यक्ति अन्तरआत्माको आवाज हो ! सकल कार्यकर्ताको आवाज हो । हिजोको एमालेका कार्यकर्ता होऊन् वा हिजोका माआवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरू घर डढाएर खरानीको भाग लगाउने मतिभ्रष्ट नेताका लहैलहैमा पार्टी फोरेर फुलमाला पहिर्याउँछन् भन्ने लागेका भए भ्रम नपाले हुन्छ ।
जनचाहनामा पाँच वर्षको स्थिर सरकार पनि चल्न दिन्नौँ ! पार्टीलाई महाधिवेशनसम्म पनि चल्न दिन्नौँ भनेर उखर्माउलो मच्चाउने, त्यसलाई विधि प्रकृयाको जलप लगाएर पार्टी फूटको संदेश प्रवाह गर्ने कुरा आजको मात्र गम्भिर विषय होइन ।
पार्टी गठनदेखि आजसम्म सहिद हुने, जेल काट्ने, या,तना व्यहोर्ने, प्रवास, भूमिगत तथा विभिन्न मोर्चामा खटेर निर्माण गरेको पार्टी आम कार्यकर्ता र समर्थक नागरिकको अभिमतका बिपरित आरिस, डाहा र विरोधीलाई मार्गप्रसश्त गर्ने कुरा हो । आन्दोलनको लामो बिरासतमा यसरी कालो पोत्न पाइँदैन । यस्तो कृत्यको कतै अनुमति पाउने छैन ।
अहिले महाधिवेशन तयारीमा नलाग्दै नेकपामा विचारको बहस छैन, सवाल के विषय हो ? अहिलेको मुख लुकाएर पदको मागबाहेक नयाँ केही देखिदैन । ओलीको विकल्पमा नयाँ उर्जावान युवा आउने संकेत वा प्रस्ताव पनि ल्याएको देखिदैन ।
पुरानै एक पटक वा पटक पटक टेस्टेड नेताको र्याल कढाइबाहेक बेतुकको रडाको मच्चाउनेका पछाडि युवापङ्ति कुनै हालतमा लाग्दैन । भविष्य जहिलेनि युवाको काँधमा हुन्छ । चुलीमा पुगेका थकीत सत्तरीको आसपासकाहरूले हलो अड्काउनु युग बिरोधी हठ हो ।
यो जीर्ण बुढो पङ्तिले आगामी महाधिवेशन र आम चुनावबाट नयाँ युवालाई मार्ग प्रसश्त गरिदिनु पर्दछ । नेकपालाई अब यही जीर्णपङ्तीले हाँक्ने हैसियत गुमाइसकेको छ । शारीरिक मा,नसिक दुवै हिसाबले अशक्त भइसकेको छ यो ।
आउने नेतृत्वमा केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम समेतलाई अविभावकीय स्थानमा राखेर कार्यकारी नेतृत्वमा नयाँ नेताहरू अघि आउनु पर्दछ ।
यसो गरिएन भने नेकपाको भविष्य कुडा कर्कट थन्काउने धन्सार त बन्ला, यसको पहलबाट उज्यालो सन्सार बन्दैन । कम्युनिस्ट शैली चरित्रमा दूरदृष्टि र सामुहिक भावनामा आफूलाई ढाल्न भन्दा वर्गबैरीको सिको गर्ने कार्यकर्तालाई कज्याउने मनोवृत्ति नेपालका कम्युनिस्ट नेतामा रहिआएको दीर्घ रोग हो ।
आलोचना आत्मा लोचनाबाट भाग्ने, ठूला कमिटी बनाएर एकोहोरो निर्देशन दिने शैलीले पार्टी चलाउने कुराले व्यवहारमा पिठ्युपछि कुरा काट्ने, कमिटीमा आलोलनालाई बिरोध ठान्ने चाकरी रूचाउने अघोरी बानी बिकास भएको पाइन्छ नेताहरूमा ।
यस्तो परिवेशले आफ्नै नेतालाई निन्दा गर्दै हिँड्ने शैली बढेको छ नेकपामा । एउटा नेताका पछि लाग्ने अवसरवादीहरू अरूलाई ‘तिमी’ सम्म भन्न छाडेको दशकौँ भए ।
यस्तैबाट नेतालाई उल्क्याउने, पार्टी अलग गर्न लगाउने हुँदैआएको छ भने जनता र देशप्रति निष्ठावान कार्यकर्ताले जहिले पनि पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन, नेताले गल्ती गर्न खोज्दा सहीबाटोमा एकताबद्ध गराउने भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।
मैले सत्तरी वर्ष लागेपछि कुनै पार्टीमा नरहने गरी नवौ महाधिवेशनको अर्को वर्ष नेकपा एमालेबाटै पार्टीका कमिटी र सदस्यता परित्याग गरेको अवस्थामा पनि हिजोका परिचित कार्यकर्ताहरू फोन गरेर नेकपाभित्रको सवालमा भनिदिन, लेख्न अनुरोध गरेको गरेका छन् ।
असी वर्ष लागेका पुराना समर्थकको पीडा सुन्दा ‘कामै गर्न दिएनन ओलीलाई’ भन्ने आ,क्रोश छ । गाउँशहरका कार्यकर्ताले पनि यो गुनासो सुनेका छन् ।
उनीहरूको मात्र होइन, जनताले नचाहेको लामो गनगनपछि गणतन्त्र कार्यान्वयनमा सघाउने काम छाडेर अन्तर कलहले जनजीविका र राष्ट्रियता प्रबर्धनमा धक्का लग्ने खतरा बढेको छ ।
यो जनसरोकारको मुद्दा पनि हो । यसपटक फेरि निजी हित भन्दा माथि सोच्ने बहुसंख्यक कार्यकर्ताको काँधमा नेकपालाई सही बाटोमा, एकताको बाटोमा हिडाउने अतिरिक्त साहसिक काम गर्ने अवस्था आएको छ ! कार्कर्ताको एकताले मात्र अहिले देखापरेको समस्यालाई टालटुल मात्र होइन, दीर्घकालीन ढंगले समाधान निस्कन सक्छ ।
(पुराना कम्युनिष्ट नेता घिमिरे राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य तथा जीवराज आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ) -पाथिभरा डेलीबाट